जानिराख्नुहोस्, श्री कृष्ण भगवानलाई यी चार कुरा सबैभन्दा प्यारो किन ? | Nepal Online Patrika
Home रोचक जानिराख्नुहोस्, श्री कृष्ण भगवानलाई यी चार कुरा सबैभन्दा प्यारो किन ?
जानिराख्नुहोस्, श्री कृष्ण भगवानलाई यी चार कुरा सबैभन्दा प्यारो किन ?
नेपाल अनलाइन पत्रिका | काठमाडौं: शास्त्रका अनुसार जब कृष्ण बासुरी बजाउँछन्, तब अलौकित आकर्षक हुने गर्दछ। कृष्ण र मुरली एक अर्कासँग निकै घनिष्ट सम्बन्ध छ। मुरली बिना भगवान् श्रीकृष्णले कल्पना समेत गर्न सकदैनन्।
उनको मुरलीसँगै ब्रह्माले सम्पूर्ण सृष्टीको अलौकित र सम्मोहित गरेका छन्। कृष्णको हातमा मुरलीको मतलब जीवनमा कुनै पनि समय हामी डराउनु पर्दैन्। भित्रबाट शान्ति भए संगीत जीवनमा उत्रिन्छ।
कृष्णको बासुरी प्रेम, कलात्मकता वा रचनात्मकताको प्रतिक हो। त्यसैले कृष्णको मुरलीले यो कुराको इशारा गर्छकी बच्चाको कलात्कमता र रचनात्मकतामा बढी ध्यान दिनु पर्दछ। आज हामी कृष्णलाई मन पर्ने बासुरी बाहेक अन्य चार कुराका बारेमा जानकारी दिदै छौँः
मयूरको प्वाख देख्ने वित्तिकै भगवान कृष्णको याद आउने गर्दछ। मयूरको प्वाख कृष्णको प्रतिक समान हो। यदी तपाई घरमा भगवान् कृष्णसँग जोडिएको केही तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने मयूरको प्वाख राख्न नबिर्सिनुहोस्। भगवान कृष्णलाई धर्म पिताले उनलाई उपहारका रुपमा मयूरको प्वाख दिएका दिए। त्यसैले उनले सधै आफ्नो मुरलीमा उक्त प्वाख सजाएर राख्ने गर्दथे।
भगवान कृष्णलाई मक्खन चोरका नामले पनि चिनिने गरिन्छ। किनकी उनलाई मक्खन यति मन पर्दथ्यो, उनले खानका लागि चोरी समेत गर्न पछि हट्दैन थिए। त्यसैले जब कृष्णको पुजा आउछ तब मक्खन चढाउने गरिन्छ।
भगवान कृष्णलाई पहेलो बस्त्रको धारण गराउने गरिन्छ। यदी तपाईले उनका कुनै तस्वीर देख्नु भयो भने त्यसमा पनि पहेलो बस्त्र देख्न सकिन्छ।
भगवन कृष्णलाई गाई निकै प्रिय थिए। उनले सबै गाईलाई माया गर्थे, चराउन लैजान्थे र उनको सेवा गर्ने थर्दथे। भगवान कृष्णका बारेमा कयौँ कहानी गाईसँग जोडिएका छन्।
केही दिन लगातार भिजाएको ओखर खानुस्, आफै देख्नुहुनेछ
स्वस्थ फ्याट, भिटामिन र मिनरलले भरिएको ओखर खाँदा मस्तिष्कको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ र स्मरणशक्ति पनि बढ्छ । त्यसबाहेक शरीरको समग्र स्वास्थ्यका लागि पनि यो लाभदायक छ।
ओखरमा प्रोटीन, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, आइरन, फस्फोरस, कपर, सेलेनियम, ओमेगा-३ फ्याट्टी एसिड जस्ता पोषक तत्त्व पाइन्छन्।
तर ओखरलाई काँचै खानुभन्दा भिजाएर खाँदा त्यसको फाइदा कैयौं गुणा बढ्छ । राति दुईवटा ओखरलाई भिजाएर राख्ने र बिहान खाली पेटमा खाने गर्दा बढी फाइदा हुन्छ।
भिजाइएको ओखरले अनेकौं रोगबाट मुक्त गराउँछ। ब्लड सुगर र मधुमेहबाट बच्नुछ भने भिजेको ओखरले फाइदा गर्छ ।
ओखरले मुटुलाई स्वस्थ राख्न पनि सहयोग गर्छ । उच्च रक्तचापको समस्या भएकाहरूलाई ओखर लाभदायक हुन्छ। यसले राम्रो कोलेस्ट्रोल निर्माणमा सहयोग गरेर मुटुलाई फाइदा दिन्छ ।
ओखर खाइरहने व्यक्तिले स्तन क्यान्सर, प्रोस्टेट क्यान्सर र कोलोरेक्टल क्यान्सर जस्ता गम्भीर रोगको खतरालाई घटाउन सक्छ।
यसमा भएको पोलिफेनोल इलागिट्यानिन्सले क्यान्सरविरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्न मद्दत गर्छ। अनि ओखर खाँदा हर्मोनसँग जोडिएको क्यान्सरको खतरा पनि कम हुन्छ। यसमा भएको एन्टीअक्सिडेन्टले शरीरमा क्यान्सर सेल बन्न पनि दिँदैन।
इम्युनिटी बढाउन, तनाव र स्ट्रेस घटाउन, राम्रो निद्रा दिलाउन, तौल घटाउन, पुरुषको प्रजनन क्षमता बढाउन समेत ओखर लाभदायक हुन्छ।
Previous articleसिरिजको टुंगो निर्णायक खेलबाट हुने
Next articleविद्युत प्राधिकरणबाट बिदाहुदै यस्तो भने कुलमानले